Indlela yokuseka ubudlelwane ngoncedo lomthetho wokukhanga?
Ngomncinci, abantu bahlala bekhangela iqabane lesini, kodwa ubudlelwane kunye nabazali, abantakwabo, abahlobo kunye nabo basebenza nabo kubalulekile. Ukuseka ubudlelwane kuthetha ukusebenzisana nabanye abantu - kunye namalungu entsapho, abahlobo, oogxa kunye namaqabane. Ucwaningo oluninzi lwezenzululwazi lubonise ukuba ububanzi obunxibelelwano kunye nolwazi lomntu, kungekhona isimo sempilo yakhe. Funda indlela yokuseka ubudlelwane ngokusebenzisa umthetho wokukhanga.
Khangela iqabane lomntu
Kwisifundo esithile sobudlelwane phakathi kwabantu ebuncinci kubonakaliswe ukuba kwiminyaka eyi-18 ukuya kwe-31 indoda ichitha ixesha elincinane kunye nabahlobo bayo ngokwesondo kwaye ikhula ingqalelo kwiqabane lesini esahlukileyo. Ukukhangela iqabane lobomi linye yeenjongo eziphambili zentombazana. Wonke umntu ulindele ukufumana uthando. Uthando olusisondeleyo luyindlela ebonakalayo ebonakalayo kummeli wesini esahlukileyo. Indoda ethandwayo ixutywa ngothando kwaye ivuya. Ukuba abathandanayo bahlukana, bahlala becinga ngomnye nomnye kwaye bafuna ukuba kunye. Nangona kunjalo, ukunyamezela akunakuhlala ngonaphakade. Ngokweengcali ezininzi, eli nqanaba lolwalamano nothando lunokuhlala kwiinyanga ezintandathu ukuya kwiminyaka emibini. Ngobudlelwane obude, uthabatha ithatha indawo yothando oluvuthiweyo - xa abathandi bekulungele ukuzincama ngenxa yomntu othandekayo. Abantu abaninzi abaselula bazama ukufumana iqabane, into efana nabo ngokwabo, umzekelo wokuba nembono efana nobomi, iimpawu, izinga elifanayo lemfundo kunye nokukhula. Kubaluleke kakhulu kukukhangela kwangaphandle. Abaphandi baqhuba uvavanyo: bathabatha iifoto zomtshato bawasika, kangangokuthi kwisiqingatha sasiyena umyeni, kunye nomnye-umtshakazi. Emva koko babonisa ezi zithombe kwiqela labantu kwaye bacela ukuba bahlole umtsalane womyeni okanye umtshakazi. Abaphandi bafumanisa ukuba amaninzi amaqabane athola inani elifanayo leengongoma kwizinga lokuthakazelisa. Oku kubonisa ukuba ngamnye kuthi uvavanye ngokunyanisekileyo umgangatho wokutsala kwakhe kwaye uyakholelwa ukuba, mhlawumbi, iya kukhatywa ngummeli wesini esahlukileyo.
Abasetyhini bazama ukufumana iqabane eliza kuzuza kakuhle kwaye liya kuba nakho ukubonelela intsapho. Amadoda atyathwa kumancinci, abasetyhini abasempilweni abakwazi ukuzala abantwana babo. Abantu badla ngokutshata kunye nethemba eliphezulu, kodwa kaninzi abaxhomekeke ekuziphenduleleni, njengokuba abafazi bajamelana neengxaki zemihla ngemihla kunye nokuphila kwangempela. Ngokomzekelo, indoda okanye umfazi kusasa ayibonakali ekhangayo njengoko yayinjalo ngexesha lobudlelwane. Zininzi iingxaki ezibangelwa ukungabikho kokuthintana. Ngokuqhelekileyo, amaqabane aphephe ukuxoxa ngesimo sabo sengqondo ngabantwana, imiba yemali kunye nokukrexeza. Okwangoku, njengomthetho, umnikelo wabalingani kulwalamano olufanayo, alinakutshiwo ngezizukulwana zangaphambili. Nangona kunjalo, yonke into iguquka ngokubonakala kwabantwana, xa umfazi eqala ukufeza imisebenzi yomama. Uninzi lwabantwana abancinci banamhlanje bayazi zonke iinjongo kunye neengxaki zokudala intsapho. Kwabaninzi, ukubonakala kwabantwana kuthetha ukulahlekelwa inkululeko kunye nokuzinza kwemali. Ngoko ke, ukuzalwa komntwana kudla ukulibaziseka, kwaye ezinye iibinibini zivumi ukungavumi ukuba nabantwana.
Ngokwezibalo, ukuya kuma-67% wamadoda kunye no-50% wabasetyhini batshintsha abafazi babo. Abasetyhini badla ngokuqhawula umtshato ngenxa yokungathembeki komyeni wakhe. Ezinye izizathu zokuqhawula umtshato ziquka ubunzima bezezimali, iingxaki zesini, okanye into yokuba umfazi akayiva inkxaso ngenxa yokungabi khona kwendoda yakhe ekhaya. Amadoda ahlukanisiweyo ahlala ekhononda ngokungathembeki kwabafazi bamandulo kunye neengxaki kunye nonina.
Njengomthetho, abantu bobulili obufanayo, malunga nobudala obufanayo kunye neemeko zentlalo, baba ngabahlobo. Ubuhlobo buyandisa ukuzithemba kwaye ayivumeli ukuba ahlale yedwa enkingeni. Abahlobo benza ubomi bunomdla - banandisa uluntu kunye nokubonelela ulwazi olutsha. Ubungane buqala ngokusemncinci, xa abantu abaphumelele esikolweni, batshintsha imisebenzi, batshata kwaye banentsapho. Xa uneminyaka engama-30, abaninzi abantu banesigxina esithinteleyo soqhagamshelwano. Oku kubangelwa kukuba ininzi yexesha umntu onalo nyaka uchitha emsebenzini okanye kunye nosapho. Xa elinye iqabane liza kutshata, kwaye elinye lisahlala lingatshatanga, izinto abazithandayo azivumi. I-ofisi yokuhleba kunye nokuthetha ngokufumana umlingane akusayi kuba nomdla kubamantombazana abancinci, ngoko ngamanye amaxesha abahlobo baqala ukugxeka ngenxa yokuzibandakanya kunye nokuzingca.
Ubudlelwane nezihlobo eziseduze
Njengomthetho, emva kweminyaka engama-30, abantu baqala ukuthetha ngokusondeleyo kunye nabazali babo. Nangona kunjalo, ubudlelwane buya kuncipha xa bengavumi ukhetho lomlingane ebomini njengendodana okanye intombi. Ngokuqhelekileyo, kunye nobudala, ubudlelwane kunye nabantwana bakowenu bube ngcono. Nangona ulwahlulo lwangaphambili, oludlulileyo oludlulileyo ludla ngokubaluleka kwemilinganiselo yobomi kunye neembono, ukubonelela ngokuvisisana.
Abantu abaninzi baxabisa ubudlelwane babo kunye noogxa babo. Nangona kunjalo, umoya osebenzayo awubavumeli ukuba bathethe nabo ngokukhululekile nangokwemvakalelo njengabantu abasondeleyo. Abantu abaninzi basebenza ekhaya bakhononda ngokulondeka. Uninzi lwabo bonke abanakho ukunxibelelana okwaneleyo.
Indlela yokukholisa indoda: I-TOP-7 iingcebiso ezilungileyo kwi-psychologist yabesifazane
Iingcamango ebudlelwaneni bomntu nomfazi
Imithetho xa udibana nabantu abangaziwa
Indlela yokubonisa intlungu phakathi kwendoda nentombazana
Ungayifaka njani i powder yokubhaka?
Izambatho eziphathekayo, i-Spring-Summer 2016
Izitiya ze-Spring kwiindawo zokuhlaziywa kweempahla ze-Mercury Flowers
E-Iraq, i-fashion show show yabanjwa. Ngokuqala kwiminyaka engama-30
Risotto e luhlaza
Kutheni i-blister ibonakala ngolwimi?
Isipho ngogogo ngoMatshi 8: iposikhadi ngokwakho
Izindlela kunye neendlela zokukhuliswa, ukuhlulwa kwazo
I-Jensen - mattresses zokulala ubukhosi
Imidlalo yezingane, idlala kunye nomntwana
I-Shawls yaseNdiya ehamba phambili yePasmina
ImiGaqo ebalulekileyo yeSondo ekhuselekileyo
Indlela yokupakisha kakuhle isipho
Indlela yokunciphisa impawu ze-osteochondrosis yomlomo wesibeleko
Ikhekhe kunye nama-apricots omisiwe